Home News Kooxda Al-shabaab oo weerartay saldhigyo ku yaala Muqdisho
Kooxda Al-shabaab oo weerartay saldhigyo ku yaala Muqdisho
Faah-faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weeraro Dagaalyahano Ka Tirsan Al-shabaab ay xalay ku qaadeen Saldhigyo Ciidamadda Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin Magaaladda Muqdisho iyo duleedkeeda.
Weerarka koowaad ayaa lagu qaaday Saldhig Ciidamadda Dowladda ay ku leeyihiin Degmadda Yaaqshid ee gobolka Banaadir,waxaana la xaqiijiyay in shabaab iyo Ciidamaada dowladda ay saacado halkaas ku dagaalameen.
Dhanka kale dagaalyahano ka tirsan Shabaab ayaa weerar ku qaaday Saldhigga degmada Garasbaaleey, halkaas oo dagaal in muddo ah qaatay uu ku dhexmaray ciidamada police-ka iyo dagaalyahanada weerarka qaaday.
Warhaahinta shabaab ayaa laga baahiyay in weeraradda ay u dhaceyn sidii loogu talagalay,islamarkaana khasaare la gaarsiiyay ciidamadda dowladda.
Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay hay’adaha amaanka oo loogu hadlaayo weeradda Xalay lagu qaaday Saldhigyadda Ciidamadda Dowladda.
Previous articleDoorashada K/galbeed oo goor-dhaw ka bilaabaneeyso Baydhabo!!
Next articleDaahir cirro oo ka hadlay Musharaxnimada C/wali gaas
Maxaa ka jira in xubno ka Tirsan ONLF la qaarijiyay (Aqriso)
Weerar lagu qaaday Xarunta Maamulka deegaanka Garas-Baaleey